Akanjo baoty → Akanjo fampiroboroboana • amboradara solosaina P&M matihanina
Sweatshirts, eo akaikin'ny varavarana akaiky pataloha i T-shirtsno fototry ny fitafian'ny mpiasa any amin'ny orinasa maro. Izy ireo ihany koa dia mpanamory tsara indrindra amin'ny dokam-barotra orinasa iray, fikambanana na hetsika, satria tsy amin'ny fametrahana sary fotsiny, fa amin'ny lokon'ny akanjo ihany koa no ahafantarana azy ireo miaraka amin'ny marika. Ny hatsemboka izay manome hafanana, mamela ny fahalalahana hihetsika mihoatra ny palitao, ary miaro akanjo tsy miankina ihany koa.
Sweatshirts - mandeha lamaody miaraka amin'ny fiononana
Ao amintsika fivarotana hahitana karazana sakelin'ny dokam-barotra dokam-barotra ho an'ny tanjona maro ianao. Ireo modely atolotra antsika dia vita amin'ny fitaovana avo lenta izay manome antoka ny fiainana vokatra lava.
Noho ny fananany dia miaro tsara ny vatana ny sweatshirts amin'ny toetrandro isan-karazany. Ny karazana modely dia mamela azy ireo hampiasaina amin'ny vanim-potoana rehetra mandritra ny taona. Miankina amin'ny toetr'andro na ny toe-javatra iasana, azonao atao ny misafidy amin'ny kinova fahavaratra sy ririnina ary manify kokoa, ary koa ny mitsambikina amin'ny lohataona sy ny fararano.
Fampiononana sy fiasa
Fantatsika tsara fa ny mpanjifanay dia mila filana samy hafa mividy izay tsy avy amin'ny toe-javatra miasa ihany, fa amin'ny filan'ny tsirairay ihany koa. Ny fahafantarantsika izany dia azonay antoka fa ny hatsembohana atolotra ao anaty vatsika dia manana endrika hiarovana amin'ny loto, mampitandrina ary miaro amin'ny zavatra simika manimba.
Ny fampiononana, miaraka amin'ny fiasa dia tena zava-dehibe koa. Izany no antony marika modely maro vita amin'ny welts mampitony amin'ny valahany sy eo amin'ny fehin-tànana mba hahazoana antoka ny fisitrihana mafana loatra ary hiarovana ny fitafian'ny tenany manokana amin'ny fanimbana na loto. Ny sasany amin'ny hatsembohana dia nanjaitra ireo singa manokana izay nampitombo ny fanoherana mekanika ireo fitaovana any amin'ny toerana tena tratry ny fahasimbana noho ny fampitomboana be dia be (oh. Elbows).
Betsaka ny orinasa mankasitraka azy maha-olona sy manokana, indrindra raha toa ka mitana andraikitra amin'ny mpiara-miasa amin'ireo mety hisian'ny mpivarotra sy mpanjifa ny mpiasa. Aorian'ity firehana ity dia mendrika ny misafidy fomba fanamarihana avo lenta izay mety hohitra amin'ny fahasimbana, ny abrasion ary manasa amin'ny hafanana avo. Noho izany, dia manoro hevitra azy izahay ho an'ny fampiasa manokana maharitra sy kanto amboradain'ny solosaina.
Borda amin'ny solosaina amin'ny akanjo
Izany no antony mahatonga ny akanjo vita pirinty ho singa malaza amin'ny akanjo isan-karazany amin'ny hetsika ivelany, solontenan'ny solontena, fihaonambe ary fanofanana. Ny akanjo amin'ny loko amin'ny orinasa na ny klioba misy azy manokana dia misy fiantraikany tsara amin'ny sarin'ny marika ary mampitombo ny lazany.
Manolotra akanjo ba avy amina orinasa toa an'i Reis, Leber & Hollman, Stedman, LH-Scot ary Adler izahay. Ny varotra dia ahitana: volon'ondry, akanjo ba miasa, akanjo ba polypropylene, akanjo lava fampitandremana, akanjo ba.
Izahay dia eo am-pelatananao amin'ny fifidianana sy ny fanaovana manokana ny vokatra. Manana zaridaina milina mandroso isika izay manome asa mahomby sy kalitao avo lenta ho an'ny mpanjifanay. Ny modely feno feno dia azo vidina ao amin'ny magazay an-tserasera www.pm.com.pl na ato amin'ny magazay misy antsika ao Allegro "Mpamokatra-BHP". Raha te hahita ny baiko santatry ny amboradara ianao, azafady tsidiho ny tab-ny firmie.
hatsikana taratrahatsembohana miaraka amin'ny amboradarasweatshirt misy logotsemboka miaraka amin'ny refesseursweatshirts tsy misy hohoblouses fiarovanatsemboka ho an'ny olona mavitrikasweatshirts ho an'ny asahatsikana ho an-tsekolyorinasa sweatshirtsfararano fararanosweatshirts fahavaratradokam-barotra sweatshirtshoodies an'ny sambodokam-barotra sweatshirts warawdoka fanaovana dokambarotraunisex sweatshirtssweatshirts lohataonavoamasoana hatsikanahatsembohana miaraka am-paosytsemboka miaraka amina pirintyhatsemboka amin'ny ririninavolom-behivavyvolon-dehilahyny hatsikana fanaovana dokambarotra tsara indrindraakanjo sy fahasalamanaakanjo ho an'ny mpiasaakanjo fanaovana dokambarotraWorkwearsweatshirts fanatanjahan-tenasweatshirt dokambarotra mora
5 / 5 ( 7 vato )